Opinions & Discussion » မီထူး မီထူး.. Same Same	14
ခင်ဇော် says: သများနောင်ဒ ရဘာဘီ။
Alinsett@Maung Thura says: ဘဇပ် ဆယ်ပေါက် ရှိယင်ဒေါင် ပျောဇရာ ဇဂါး မယှိဒေါ့ဗာပုစ်
ဟမ်စောင် ပျုံးယဒေါ့မှာပ အနူဒေါထဲမှာ ကိုယ့်အရှင်းရှင်းဗဲ လှသလားမေး
အူးစည် says: အူးကြောင် ဘာမှရှင်းပြမနေနဲ့ဒေါ့.. ဇွန်ကြီး စကောလားရှစ်ရရေးး တို့အရေးဘဲ…
naywoon ni says: အဲ့ဂလို ဆိုdog ကျုပ်​ဒို့က ဘာsex လုပ်​ရမလဲ ။ ထ ကရမာလား ¿ အဲ့ သဗုံထ ယမလား ¿¿¿ လာ ခီညားပျံလာပြည်း ​ခေါင်း​ရှောင်​လဲ့ !
အောင် မိုးသူ says: ငယ်သူမို့ မသိပါ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8413
Ma Ma says: ကိုယ်ကတော့ ဘာကွန်မန့်မှ မပေးတတ်ဘူး။
ဒါပေမယ့် ပိုစ့်ရေးသူနဲ့အပြိုင်ကွန်မန့်တွေက မိုက်စ်တယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14466
kai says: သူတို့မှာက.. ယုတ်မက်၇ချက်ရှိတယ်လေ…
နှစ်၁၀၀၀ ကျခဲ့တဲ့.. ကျိန်စာက… ခင်ဗျားတို့မလွတ်တော့ဖူးဆိုတာကိုတော့.. ပြောချင်…။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3663
naywoon ni says: အဟင့်​ သူဂျီး​ပြောသလိုဆိုရင်​ ဗုဒ္ဓဘာသာက ခဏ ထွက်​ပီး ဒီမိုက​ရေစီစစ်​စစ်​ ရမှ သရဏဂုံ ပြန်​တင်​ရမဲ့ ကိန်း Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14466
kai says: ကိုရင်နေပြောပုံက.. အခုလောလောဆယ်မှာ..ထေရာဝါဒထဲမှာမရှိနေပဲ.. ဗုဒ္ဓဘာသာထဲမှာပဲရှိနေသလိုလို…။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3663
naywoon ni says: ဘာသာတရားက ကျမ်းစာအုပ်​​တွေထဲမှာပဲ ရှိ​နေတာ လူ​တွေရဲ့ ရင်​ဘတ်​ထဲမှာမရှိဘူး ။ လူ​တွေရဲ့ ရင်​ဘတ်​ထဲ ရှိ​နေတာက အယူသီးမှု​တွေ ဝါဒအမျိုးမျိုးရဲ့ စွန့်​ပစ်​ပစ္စည်း​တွေနဲ့ ပြည့်​​နေတာ ။
Wow says: တောက်ကြောင်… အသလွတ်ဝင် ဆွမ်းကြီးလောင်းသွားသီ မှတ်ပါ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1294
uncle gyi says: နှစ်ကူးသွားဘာမှမထူးမဟုတ်
တိမ်မည်း says: အူးကြောင်ကြီး ပြန်လာမှ ထူးလိမ့်မယ်…
၀င့်ပြုံးမြင့် says: ကကြောင် says: စစ်တပ်ကို မဝေဖန်၊ အစိုးရကို မဆန့်ကျင်ရ၊ ဘာသာ သာသနာကို မလေးမစား မလုပ်ရ။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ အဲဒီအရာသုံးခုကို နိုင်ငံဒေါ်လို့ ပုံသွင်းရို်က်ယူထားလို့။